Aigara achida zvekukwira, saka ndakazomugadzirira size tiri mubath yepaAirport – VanodaZvinhu
Naturally, we checked out the plane’s bathroom tikaona kuti yainge iri diki kuti tisvirane imomo. Taikagara pa3 seater musikana wangu ainge arikuwindow ini ndainge ndakagara pamiddle seat and the other seat painge pane some Australian dude. Tichigara pasi Patie my girlfriend akabva akumbira a blanket from flight attendant and she covered us both. Patie akaisa ruoko rwake mubhurugwa ndokuburitsa mboro yangu under the blanket akatanga kuibonyora slowly kuti the guy sitting next asawone zvaitika.
She whispered in my ear akati nhasi ndinoda kuti utunde chete.